Ny Voahangy Lafo Vidy dia fantina avy amin’ireo lahatsoratra notsongaina mikasika ireo lafiny manan-danja maro momba ny finoana sy ny fotopampianaran’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany. Ireo lahatsoratra ireo dia nadika sy novokarin’i Joseph Smith Mpaminany, ary ny ankamaroany dia navoaka tao amin’ny gazetim-piangonana nisy tamin’ny androny.
Manambara ny Tenany amin’i Mosesy Andriamanitra—Miova tarehy i Mosesy—Mifanandrina amin’i Satana izy—Hitan’i Mosesy ireo tontolo maro misy mponina—Tsy hita isa ireo tontolo noharian’ny Zanaka—Ny asan’ Andriamanitra sy ny voninahiny dia ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizain’ny olona.
Nahary ireo lanitra sy ny tany Andriamanitra—Voary ireo endriky ny mananaina rehetra—Nanao ny olona Andriamanitra ary nomeny azy ny fanapahana amin’ny zavatra hafa rehetra.
Noharian’ Andriamanitra ara-panahy ny zava-drehetra talohan’ny nisiany araka ny vatana teto an-tany—Nohariany ralehilahy, ilay nofo voalohany teto an-tany—Ravehivavy dia mpanampy sahaza ho an-dralehilahy.
Ny nahatonga an’i Satana ho devoly—Naka fanahy an’i Eva izy—Lavo i Adama sy i Eva, ary niditra teo amin’izao tontolo izao ny fahafatesana.
Niteraka i Adama sy i Eva—Nanatitra fanatitra i Adama ary nanompo an’ Andriamanitra—Teraka i Kaina sy i Abela—Nikomy i Kaina, notiaviny mihoatra noho Andriamanitra i Satana ary tonga Fahaverezana izy—Niely ny famonoana olona sy ny faharatsiana—Notoriana hatrany am-piandohana ny filazantsara.
Nitana bokim-pahatsiarovana ny taranak’i Adama—Nitory fibebahana ny taranany marina. Naneho ny Tenany tamin’i Enoka Andriamanitra—Nitory ny filazantsara i Enoka—Nambara tamin’i Adama ny drafitry ny famonjena—Nandray ny batisa sy ny fisoronana izy.
Nampianatra, nitarika ny vahoaka ary namindra Tendrombohitra i Enoka—Naorina ny tanànan’i Ziona—Hitan’i Enoka mialoha ny fiavian’ny Zanak’Olona, ny sorompanavotany ary ny fitsanganan’ireo Olomasina amin’ny maty—Hitany mialoha ny famerenana amin’ny laoniny, ny Fanangonana, ny Fiaviana Fanindroany ary ny fiverenan’i Ziona.
Naminany i Metosela—Nitory ny filazantsara i Noa sy ny zanakalahiny—Nanjaka ny faharatsiana lehibe—Tsy noraharahaina ny fiantsoana mba hibebaka—Nodidian’ Andriamanitra ny fandravana ny nofo rehetra amin’ny Safo-drano.
Nokatsahin’i Abrahama ireo tsodranon’ny lamin’ny patriarikaly—Nenjehin’ireo mpisorona sandoka tao Kaldea izy—Novonjen’i Jehovah izy—Fijerena indray ny niandohana sy ny governemantan’i Egypta.
Nandao an’i Ora i Abrahama ary nankany Kanana—Niseho taminy tao Harana i Jehovah—Ireo fitahian’ny filazantsara rehetra dia nampanantenaina ny taranany ary amin’ny alalan’ny taranany ho an’ny rehetra—Nandeha nankany Kanana izy ary nanohy hatrany Egypta.
Nianaran’i Abrahama tamin’ny alalan’ny Orima sy Tomima ny momba ny masoandro, ny volana, ny kintana—Nambaran’ny Tompo azy ny toetra mandrakizain’ireo fanahy—Nianatra ny amin’ny fiainana talohan’ny fianana an-tany, ny fanokanana mialoha, ny fahariana, ny nifidianana Mpanavotra ary ny toetra faharoan’ny olona izy.
Novolavolain’ireo Andriamanitra ny fahariana ny tany sy ny aina rehetra eo aminy—Aroso etoana ny drafiny nandritra ny enina andro nahariana izao tontolo izao.
Novitain’ireo Andriamanitra ny drafiny momba ny fahariana ny zava-drehetra—Notanterahany ny Fahariana araka ny drafiny—Nomen’i Adama anarana ny voary manana aina rehetra.
Joseph Smith—Matio 1
Nolazain’i Jesoa fa efa mananontanona ny fandravana an’i Jerosalema—Nandaha-teny ny amin’ny fiavian’ny Zanak’Olona sy ny famongorana ny olon-dratsy koa Izy.
Joseph Smith—Tantara 1
Milazalaza ny amin’ny firazanany, ny ankohonany ary ny toeram-ponenany teo aloha i Joseph Smith—Nanjaka tao New York andrefana ny fahamaimaizana tsy fahita momba ny fivavahana—Nanapa-kevitra izy fa hikatsaka fahendrena araka izay atoron’i Jakoba—Niseho ny Ray sy ny Zanaka ary voantso ho amin’ny asa fanompoan’ny mpaminany i Joseph. (Andininy 1–20.)
Mino an’ Andriamanitra, ilay Ray Mandrakizay, isika ary mino an’i Jesoa Kristy Zanany sy ny Fanahy Masina.